आइतबार रूट / आधुनिक मोड: ग्यालक्सी S3i र मिनी Android 4.4.3..XNUMX..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस् Androidsis
आइतबार रूट / आधुनिक मोड: ग्यालक्सी S3i र मिनी Android 4.4.3..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस्
Googled | | एन्ड्रोइड रूट, ट्यूटोरियलहरू
नमस्कार तपाईलाई कस्तो छ, प्रार्थना गर्दै कि आइतवार र सोमबार बीच एक दिन छ? म उही हुँ, तर जब यो हुन्छ यो तपाईंलाई कक्षा वा अफिसमा आइपुग्छ जस्तो देखिन्छ तपाईंको छातीको साथ तपाईंको ब्राण्ड नयाँको साथ ग्यालक्सी S3 Android 4.4.3..XNUMX मा अपडेट भयो!। कसरी? अहिले नै म तपाईंलाई यो दोस्रो र नयाँ सेक्सनमा भन्छु Googled तपाईंको लागि ल्याउनुहोस्, यो लगभग हो आइतबार रूट / आधुनिक जहाँ हामी हरेक आइतवार सम्बन्धित शीर्षकलाई सम्बोधन गर्नेछौं तपाईंको टर्मिनल चरण-देखि-चरण परिमार्जन गर्न।
1 ग्यालक्सी S3i Android 4.4.3..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस्
1.1 आवश्यक फाईलहरू
1.2 स्थापना विधि
3 ग्यालक्सी एस Mini मिनीलाई Android 3..4.4.3 मा अपडेट गर्नुहोस्
3.1 आवश्यक फाईलहरू
3.2 फ्ल्याशिंग विधि
ग्यालक्सी S3i Android 4.4.3..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस्
जारी गर्नु अघि, मैले यो स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि ट्यूटोरियल यसको लागि हो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S3 अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल (GT-I9300) पहिले जरा र साथ रिकभरी परिमार्जित स्थापित। EIF फोल्डरको एक ब्याकअप प्रतिलिपि हुनुको साथै परिमार्जित रिकभरीबाटै बनाइएको हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीको ब्याकअप हुनुका साथै महत्त्वपूर्ण महत्व हुनु पनि हो। चलाख? हामी यहाँ जान्छौं।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S3 ब्याट्री यसको अधिकतम क्षमतामा चार्ज गरिएको छ र टर्मिनल सेटिंग्सबाट USB डिबगिंग सक्रिय छ।
Cyanogenmod 11 को अन्तिम राती संस्करण
नेटिभ गुगल अनुप्रयोगहरू।
यदि तपाईं पहिले नै साइनोजेनमोड ११ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, रातमा सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्, र यसलाई एसडीकार्ड वा आन्तरिक मेमोरीमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् र एउटा बनाउनुहोस् क्यास विभाजन खाली गर्नुहोस् र उन्नत बाट डाल्विक क्यास सफा गर्नुहोस्, पछि sdcard विकल्पबाट स्थापना zip बाट रोम फ्ल्यास गर्न सक्षम हुन।
यदि तपाईं सामसु'sको सक्कली एन्ड्रोइड स्टक संस्करण (एन्ड्रोइड 4.3. use), वा केनोोजेनमोड ११ बाहेक केहि ROM प्रयोग गर्नुहुन्छ भने दुबै ज़िपलाई आन्तरिक मेमोरीमा कपि गर्नुहोस् र तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
डेटा कारखाना रिसेट वाइप गर्नुहोस्
क्यास विभाजन मेटाउनुहोस्।
उन्नत / dalvik क्यास सफा गर्नुहोस्।
माउन्ट्स र भण्डारण र हामी प्रणाली, डेटा र क्यास ढाँचा।
फेरी पछाडि जानुहोस्।
Sdcard बाट zip स्थापना गर्नुहोस्
Zip छनौट गर्नुहोस्
हामी रातीको जिप चयन गर्दछौं र यसको फ्ल्यासको पुष्टि गर्दछौं।
फेरि zip छनौट गर्नुहोस्।
हामी गुगल गप्प्स को जीप चयन र यसको स्थापना पुष्टि,
अब प्रणाली रिबुट गर्नुहोस्।
तयार छौं हामी S3i को साथ समाप्त (GT-I9300)!
ग्यालक्सी एस Mini मिनीलाई Android 3..4.4.3 मा अपडेट गर्नुहोस्
हामीले ग्यालक्सी एस i आईमा गरेजस्तै, हामीसँग सबै स्थापित अनुप्रयोगहरूको ब्याकअप हुनुपर्दछ, र रोम स्थापना गर्ने प्रक्रियामा हामी एउटा कारखाना रिसेट गर्नेछौं र ती सबै हराउनेछौं। १००% मा ब्याट्री हुनुका साथै सेटिंग्स मेनूबाट विकासकर्ता विकल्पहरूबाट USB डिबगिंग सक्षम हुनु बाहेक, हामी फोन / बिल्ड नम्बरको बारेमा विकल्पबाट तिनीहरूलाई सक्षम गर्न सक्दछौं, बिल्ड नम्बरमा प row्क्तिमा सात पटक क्लिक गर्नुहोस्।
सामसु K Kies
Android 11..4.4.3..XNUMX किट क्याटको साथ Cyanogenmod ११ रोम
नेटिभ गुगल अनुप्रयोगहरू। यस फाईललाई तपाईंको कम्प्युटरको मेमोरीको मूलमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
1) साइनोजेनमोड ११ रोमको zip फाईल अनजिप गर्नुहोस् हामीसँग .tar.gz फाईल नभएसम्म, अब अनडिप ओडिन गर्नुहोस् र .exe फाईललाई यस रूपमा चलाउनुहोस्। प्रणाली प्रशासकहरूयसको लागि हामी दायाँ माउस बटनको साथ प्रतिमामा क्लिक गर्दछौं र विकल्पको चयन गर्दछौं प्रशासकको रूपमा चलाउनुहोस्। विन्डोज एक्सपीमा यो आवश्यक छैन।
2) चलाउनुहोस् Odin y PDA विकल्प मात्र चयन गर्नुहोस्, अहिले खोज्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् el Cyanogenmod 11 rom .tar.gz फाईल। एक पटक चयन गरियो निश्चित गर्नुहोस् त्यो विन्डोको बाँया माथिल्लो बक्सहरूमा, NO विकल्प जाँच गरियो पुनः विभाजन.
3) अब जडान गर्नुहोस् पीसीमा S3 मिनी र हामी तपाइँको लागि कुर्नेछौं ओडिन चिन्नुहोस्, te तपाईं एक को लागी खाता हुनेछ शब्दको साथ सानो बाकसCOM थप एक संख्या जुन कार्यक्रमको माथिल्लो बायाँ भागमा देखा पर्दछ। एक पटक हामी देखा पर्दछौं said box, हामी क्लिक गर्नेछौं स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र हामी प्रोग्रामले यसको काम सिध्याउनको लागि कुर्दै छौं, जुन PASS शब्द माथिको बायाँ कुनामा फर्काइनेछ।
)) सावधान! ग्यालेक्सी एस mini मिनीलाई कम्प्युटरबाट विच्छेदन गर्नुहोस् र तुरून्त Cyannogenmod3लोगो देखा पर्दछ र प्रणाली लोड गर्न सुरु हुन्छ, हामी ब्याट्री हटाउँछौं यसलाई फेरि खोल्नको लागि तर खोल्नुहोस् रिकभरी मोड o पुन: प्राप्ति मोड, यो गर्नका लागि होल्ड गर्नुहोस् भोल्यूम कुञ्जी अप प्लस होम प्लस पावर।
5) एक पटक भित्र रिकभरी मोडहामी विकल्प चयन गर्दछौंbर हामी सबै बक्सहरूमा टिक लगाउँदछौं आन्तरिक मेमोरी र sdcard बाहेकएक पटक चयन भएपछि, हामी कार्य कार्यान्वयन गर्न बारलाई स्लाइड गर्दछौं।
6) हामी मुख्य TWRP रिकभरी स्क्रिनमा फर्कन्छौं र हामीले विकल्प मात्र छान्नु पर्छ स्थापना हेर्नका लागि जिप को नेटिभ गुगल अनुप्रयोगहरू जुन हामीले पहिले डाउनलोड गर्यौं र जुन हामीले सामसु Galaxy ग्यालक्सी एस3मिनीको आन्तरिक मेमोरीमा प्रतिलिपि बनायौं।
7) एक पटक विकल्प छनौट गरियो स्थापना हामी विकल्प कार्यान्वयन गर्न बारलाई स्लाइड गर्दछौं, अब यसको लागि पर्खनु पर्याप्त छ समाप्त, पछि विकल्प छनौट गर्न प्रणाली अहिले रिबुट गर्नुहोस्.
8) टर्मिनल रिस्टार्ट हुनेछ र भोईला, हामीसँग पहिले नै Android 4.4.3..XNUMX छ।
खैर, त्यो आजको लागि हो, यो Android 4.4.3. Android को साथ हप्ता सुरू गर्न सुत्ने समय हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » एन्ड्रोइड रूट » आइतबार रूट / आधुनिक मोड: ग्यालक्सी S3i र मिनी Android 4.4.3..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस्
म AOSB रोमको साथ छु, 4.4.3. with को साथ, CM11 बाट आएको हो। के मलाई थाहा थिएन कि मेरो S3 ले रोमको साथ खराब फोटोहरू बनाउँदछ जुन सामसु। स्टक होइन। र हो, यो धेरै छिटो जान्छ र प्रदर्शन धेरै राम्रो हुन्छ। तर जेनेरिक ड्राइभर भएको क्यामेरा त्यति राम्रो छैन। म नोटको पोर्ट वा i9305 देखि 4.4 कसरी काम गर्दछ भनेर हेर्नको लागि कुर्दै छु। यदि होईन भने म 4.3..XNUMX फिर्ता जान प्रयास गर्ने छु। मेरो लागि क्यामेरा आवश्यक छ। तर यो तपाइँ कसरी यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
डेव लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, Googlelizados मा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईंको टिप्पणीको बारेमा, यस पोर्ट सामसु from भन्दा बिल्कुलै फरक छ, स्ट्याक अनुप्रयोगहरूलाई पन्छाएर अन्य पक्षहरू जस्तै स्थिरता र प्रदर्शन सुधार गर्न। अब, नि: शुल्क LGCamera अनुप्रयोग प्लेमा प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, जुन कुनै स्टक क्यामेरा अनुप्रयोगको भन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ।
के म यसलाई मेरो गैर-रूट s3 मा स्थापना गर्न सक्दछु? यो यस्तो छ कि खराब अपडेट त्रुटिको कारण, कुनै पीसीले यसलाई पहिचान गर्दैन, त्यसैले म रुट वा परिमार्जन गरिएको रिकभरी स्थापना गर्न सक्दिन, र यो रोममा मैले देख्छु कि यो आवश्यक छैन।
DanteCreedEclair लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, Googlelizados मा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईंको प्रश्नको सन्दर्भमा। CM11 स्थापना गर्न तपाई दुबै मोडेलमा रुट हुनु आवश्यक छ। अन्यथा तपाईं आफ्नो उपकरण बिगार्न सक्छ।
नमस्ते, म ट्यूटोरियल पढ्दै थिएँ, किनभने मसँग जरा S3 मिनी छ जुन म केही परिवर्तन गर्न चाहान्छु, (रमाईलोको लागि), तर मैले यो याद गरें कि तपाईं S3i को बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो मोडेल GT-I8190N हो, यो ट्यूटोरियलका लागि उपयोगी छ? के यसले संस्करण support.4.4.3..XNUMX समर्थन गर्दछ? अग्रिम धन्यवाद।
नमस्कार, Googlelizados मा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईंको प्रश्नको सम्बन्धमा, हो, यो पोस्टको अन्त्यमा हो: ग्यालक्सी S3 मिनी Android Android.4.4.3..XNUMX मा अपडेट गर्नुहोस्
तपाईंको मामलामा, मोडेलले केही फरक पार्दैन, यो मिनी संस्करण हो।
धेरै धेरै धन्यबाद, सत्य यो हो कि जब मैले यसलाई फेरि पढें भने मैले अझ राम्ररी हेरें: पी।
यसले मोडेललाई संकेत गर्‍यो किनभने यसले एनएफसीलाई समर्थन गर्दछ, र यदि यो ROMले पनि यसलाई गर्छ कि भनेर थाहा थियो। धन्यवाद अभिवादन।
नमस्ते! तपाईलाई स्वागत छ। यस ROM हेर्नुहोस् NFC सहित सबै कार्यहरू प्रदान गर्दछ। यस रोमले के गर्छ कम्प्युटरलाई छिटो र अधिक स्थिर बनाउन स्यामसंग कस्टमाइजेसनलाई अन्त्य गर्दछ। अनावश्यक अनुप्रयोगहरूको सर्तमा।
समस्या: मेरो S3 मिनी जरा पछाडि पछि, केहि अनौंठो कारणले गर्दा म यो बुझ्दिन
मैले USB मार्फत कनेक्ट गर्दा यसले पीसी पत्ता लगाउँदछ; मैले यसलाई SD मार्फत स्थापना गर्ने प्रयास गरें,
तर यसले मलाई "हस्ताक्षर प्रमाणीकरण असफल भयो" भन्छ। मैले सोचें कि एक गरी
सफा गर्नुहोस् र फ्याक्ट्री मानहरू राख्नुहोस् र जड से स्थापना हटाउनुहोस्
ठीक हुनेछ, तर केहि छैन।
के मसँग कुनै विकल्प बाँकी छ?
मँ देख्छु ... के तपाईंले "USB डिबगिंग" विकल्प सक्रिय छ भनेर प्रमाणित गर्नुभयो? सेटिंग्समा हेर्नुहोस्, विकास विकल्प।
«USB डिबगिंग With को साथ जाँच गरियो, अनचेक गरियो, डाउनग्रेडमा पुन: सुरु गरेपछि ..., यो सबै गर्छ ब्याट्री चार्ज हुन्छ
ड्राइभर समस्याहरू छैनन्, किनकि मसँग अर्को समान I8190N छ, तर मूल बिना, यसले यसलाई पत्ता लगाउँदैन।
एउटा प्रश्न, तपाईंले रुट गर्नको लागि कुन प्रोग्राम प्रयोग गर्नुभयो?
समयमा मैले यसलाई ओडिन र xda को मूल द्वारा गरे।
उत्तम, हेर्नुहोस्, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यो ट्यूटोरियलको साथ तपाईं रूट हटाउनुहोला र त्यसपछि वीआरूटको साथ जरा प्रदर्शन गर्नुहोस्, जुन मैले यहाँ वर्णन गरें। https://www.androidsis.com/rootea-cualquier-xperia-vroot
VRoot को साथ मलाई विभिन्न ग्यालक्सी र विभिन्न Xperia मोडेलहरूमा कुनै समस्या छैन। त्यसैले यसलाई प्रयास गर्नुहोस् try
केहि पनि छैन ... 🙁 मुख्य समस्या यो हो कि मोबाइल फोनले मलाई USB मार्फत पत्ता लगाउँदैन, यसले मात्र शुल्क लिन्छ। र ड्राइभरहरू स्थापना गरिएको छ, किनकि उस्तै टर्मिनलले यसलाई चिन्न सक्दैन।
मलाई लाग्छ यो असम्भव हुनेछ। म फेक्ट्री रीसेट केहि भौतिक तरिकामा गर्न सक्दछु कि भनेर पत्ता लगाउनेछु। तपाईको समयको लागि धन्यबाद।
ब्रायन एरेन्डोन्डो हेरेरा भन्यो
मसँग .tar.gz मा रोम फाईल छैन। मसँग यो .tar.md5 मा छ, मैले के गर्नु पर्छ वा म यो जस्तै गर्न सक्छु?
ब्रायन एरेन्डोन्डो हेरेरालाई जवाफ दिनुहोस्
व्हाट्सएप, ट्रिकहरू र अधिकको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
Android को ट्रू स्टोरी - Froyo बाट जिन्जरब्रेड (२०१०) मा विकास